MINDA NEMUTIMU INOTONGA: Martin Vrijland
Kukurukurirana: 'DMT yakanaka here kwauri kana kwete?' Uyu murume kamwe kamwe akaona kuburikidza nekuenzanisa
Akaiswa mukati MIND & SOUL INOTONGA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 13 August 2018	• 2 Comments
Kunyange zvazvo mune yangu yapfuura pamusoro DMT, nefuma iri mudzi-kufanana extractions sezvo ayahuasca uye iboga, zvairatidza kuti iwe vorega ari transceiver functionality pamusoro Saturn code, ipapo akazviratidzazve anonongedzera kuti seep kubva kuvanhu chaicho kuzarura zvinhu kutanga kutarisa kuburikidza nekushandiswa kweDMT. [...]
Akaiswa mukati THE SIMULATION, MIND & SOUL INOTONGA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 8 August 2018	• 9 Comments
Kunyange ndine muduku chaizvo akanga atova kuti havatendi Mwari ane rudo, asi kunyanya akatendeuka kutya, izvozvo fascinates ini sei mabhiriyoni evanhu vari kubatikana nezvinhu zvavo kutenda maitiro uye regai kutsanangura upenyu hwavo hwose kuburikidza. Zvino kwete kutenda chete muna Mwari, Allah, Jesu, [...]
Ayahuasca DMT-semigumisiro uye basa repineal gland
Akaiswa mukati MIND & SOUL INOTONGA	by Martin Vrijland	musi wa 6 August 2018	• 5 Comments
Kugara ini pfungwa kuedza munhu DMT-kufanana fuma muchimiro ayahuasca kana DMT tubhokisi nevamiririri. Zviripachena fuma iyi zvaanopa simba ari pineal shwanu, izvo chinoita mhando ruzivo anenge afa uye uine zvose zvemarudzi kubva zvakaitika muviri. Iye zvino ndaedza mamwe madhiragi mu [...]
Ndiani akasika Lucifer uye chii madhimoni, jinns kana mashekeri mumuenzaniso wekufananidza?
Akaiswa mukati THE SIMULATION, MIND & SOUL INOTONGA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 5 August 2018	• 6 Comments
Kunyanya kubva pamakona evanhu vane maonero echiKristu kana maIslam ehupenyu Ndinowanzobvunza mubvunzo: Kana iwe uchifunga kuti zvinhu zvose zvakagadzira chimiro chaLuciferian, ndiani akasika Lucifer uye zvakadini nemadhimoni, jinns, archons? Ndinoda kujekesa izvi munyaya ino uye iniwo ndicha [...]
Iko gore reGoogle rinotsigira nzira yeAurgmented Reality (AR) inoratidza dzidziso yokuti zvinhu zvose zvakafanana here?
Akaiswa mukati THE SIMULATION, MIND & SOUL INOTONGA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 5 August 2018	• 4 Comments
Mushure mokunge makanyora zvinyorwa zvishomanana pamusoro pechirevo chokuti iwe neni tinorarama muchokwadi chaiye, maitiro akawanda anoratidza kuti vaverengi vari pane kushamiswa. Nemhaka yekuti ndave ndichitaura kuti chirevo che "quantum entanglement" chinhu chinokosha chinokanganisa iyo Einstein yenharaunda yenharaunda uyewo kukurumidza kwechiedza (semuganhu wemuviri), [...]
Vanhu vakawanda vanotanga kuona kuti tinorarama mukufananidza: ichi ndicho chikonzero
Akaiswa mukati THE SIMULATION, MIND & SOUL INOTONGA	by Martin Vrijland	musi wa 3 August 2018	• 9 Comments
Rizwan ( "Riz") Virk ari kubudirira entrepreneur, investor, bestselling munyori, piyona vhidhiyo mutambo indasitiri uye akazvimirira firimu mugadziri. Kuburikidza ruzivo ake ari paIndaneti mitambo uye kudzidza anosanganisira quantum wefizikisi uye zvechitendero kufamba, akasvika pakugumisa kuti kwazvo fungidzira kuti mune multiplayer rakapotsa chokwadi mutambo mhenyu. [...]
Chii chatingaita kuti tigadzirise matambudziko edu? Spooky action ari kure!
Akaiswa mukati THE SIMULATION, MIND & SOUL INOTONGA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa 1 August 2018	• 4 Comments
Aya mavhidhiyo ari pasi apa anopa ruzivo runonzwisisika pamusoro pechiratidzo chekugadzikana kweyero. Shanduro yeChirungu yeiyi inowedmenti inow. Kana iwe ukatarisa vhidhiyo iri pasi apa unogona kuwana manzwiro ezvokuti izwi iri rinorevei. Izwi rokuti quantum entanglement rinobatsira kunzwisisa, nokuti mumaonero angu rinotaura zvakawanda nezvehupenyu hwedu. Muchikamu changu chekare ndakaita [...]
Akaiswa mukati THE SIMULATION, MIND & SOUL INOTONGA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 30 July 2018	• 22 Comments
Waiziva here kuti zvinhu zvose zvaunoona zvinongowanikwa kana zvichionekwa? Izvi zvinoratidza kushandiswa kwemazana emakore ekare anonzi slits kaviri (kuvhara kaviri). Vavengi vese physics munyika yose vakaita izvi kuedza mazana emamwe nguva, nokuti zvakatungamirira mukusava nekutenda kwakanyanya uye panguva imwechete kushamisika kwakadaro. Iko kutsvaga kuti [...]
Mifananidzo yeMuporofita Muhammad (rugare ngaruve pamusoro pake) uye kukwikwidza kwekartoon yaGeert Wilders
Akaiswa mukati MIND & SOUL INOTONGA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 27 July 2018	• 12 Comments
Rikarova neni zvinosanganisira mashoko kubudikidza Sheikh Imran Hosein, ndinofarira kuteerera nokuda Kuongororwa ake nhoroondo uye zviri kuitika chokuita Islamic uprofita vaMuslim zvinenge kumbobvira kutaura zita muporofita Muhammad, uye kana vanozviita vanowedzera mutongo wose kwavari. [...]
Jesu ndiye Muponesi wevose vanozvipa kwaari! Kana kuti Islam ndiye nzira yechokwadi chete here?
Akaiswa mukati MIND & SOUL INOTONGA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	pana 26 July 2018	• 48 Comments
Ndakatumirwa nenyaya nhasi pamusoro pekurwadziwa kwevana vaduku nevana vacheche zvakashandiswa kusvikira mumakore '80 pasina narcosis, nokuti hurongwa hwemagetsi hwakanga husati hwagadzirwa. Ndinokurudzira kuti uverenge chinyorwa ichi kutanga usati waenderera pano. Muzvokwadi, ndezvekutambudzika. Kutambudza kwekutanga [...]
Kushanya kwakazara: 2.635.517